Ukutshaya kungcolisa okusingqongileyo ukongeza ekonakaliseni impilo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ukutshaya kungcolisa indalo ukongeza kwimpilo eyonakalisayo
Adriana | | Ikhaya eliGreen
El ukutshaya Ngumkhwa oyingozi kwimpilo kodwa unefuthe elibi kwi ngileyo.
Icuba liyavelisa ungcoliseko lomoya, ukugawulwa kwamahlathi, kutshintsha kwe mozulu, ukuveliswa kwenkunkuma nemililo yehlathi.
Namhlanje kwiidolophu ezininzi kuthintelwe ukutshaya kwiindawo ezivaliweyo, ke abo batshayayo baphumela ngaphandle bavelise Ukukhupha igesi nezingcolisi zetyhefu kwiatmosfera.
Qho ngonyaka kuqikelelwa ukuba malunga ne-4,5 yezigidi zezigidi zeebhokhwe okanye icuba elenziwe emhlabeni. Ezi mpundu zecuba zithatha iminyaka engama-25 ukubola kwindalo esingqongileyo.
Izinto ezibaluleke kakhulu umdiza itela kunye nenicotine zinokungcolisa ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-50 zamanzi ukongeza ekubulaleni iintlanzi, iintaka kunye nezilwanyana ezidibana nale ntsalela.
Ukongeza, isixa esikhulu sephepha sisetyenziselwa ukwenza iisigarethi kunye neephakeji.
Los imililo yehlathi Zihlala ziveliswa kwinxalenye enkulu yempuphu yecuba elidadayo. Kodwa iyakuthanda ukugawulwa kwamahlathi okoko amahlathi agawulwa ukuze kukhule icuba ngenxa yemfuno enkulu yale mveliso kwintengiso.
Ukuqukumbela, ayonakalisi nje kuphela impilo yomntu otshayayo, yabantu abamngqongileyo, kodwa ikwadala okanye inyanzelise iingxaki zomhlaba jikelele.
Ukutshaya ayisosenzo sabucala esimsulwa esichaphazela kuphela nabani na owenzayo, kodwa iziphumo zayo kwindalo ziyanda kwaye nabantu abaninzi abakwenzayo, sele kukho izigidi zabantu abatshayayo yonke imihla.
Ukuba sinomdla wokukhathalela okusingqongileyo kunye nokusebenzisana ekuphuculeni umgangatho wobomi emhlabeni, kufuneka siyeke ukutshaya.
Umzi mveliso wecuba yenye yezona zinto zibalulekileyo emhlabeni kwaye zezona ziphembelela ezona ndawo zininzi kwiindawo ezahlukeneyo ukuze ukusetyenziswa kwecuba kungathintelwa, kodwa bayangenelwa kwimpilo yabantu kananjalo bekwandisa iingxaki zemekobume.
Kunzima ukuyeka ukutshaya kodwa unokuzama ukwenza oko kungekuphela kwimpilo yethu kunye nomgangatho wobomi kodwa nokukhathalela okusingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Ukutshaya kungcolisa indalo ukongeza kwimpilo eyonakalisayo
Umbuzo: impundu yecuba, zingaphi iilitha zamanzi ezinako ukungcolisa?
Ukufikelela kwiilitha ezingama-50 okanye ngaphezulu
linamagama amabi kakubi.
Kwaye uginye amavili okusila anje ngeli nqaku Ungakanani ungcoliseko?
wanga uThixo anganenceba eluntwini! indoda enye itshabalalisa indalo
Kuyamangalisa ukuba zingaphi iziyobisi ezinganikeli ntweni ngendawo esingqongileyo kuba zitshintshiwe kwaye zenziwa ngendlela eyiyo azikhathali nokuba ziyonzakalisa enye ukuba ivelisa umsi wokusingqongileyo konke konke kwaye okona kubi ukuba umntu akalazi akunamsebenzi kwaye ungcolisayo. Amakhoboka asebenzisa eli tyhefu kufuneka ulinqande kwaye ulirhoxise
Yonke into isezingqondweni zomntu ngamnye… .. Kodwa ngokucacileyo kufana nokuzama ukukuyeka ukutya okukhawulezayo. Le yinto ikuyo yonke indawo kwaye ihlasela i-Subconscious yabantu.
Utshintsho lwemozulu lonakalisa iti ekhulayo eUganda
Izindlu eziluhlaza zibaluleke ngakumbi kwintengiso yezindlu